Dongguan Enuo mold Co., Ltd idivi reHong Kong BHD Boka, dhizaini yepurasitiki yekuumbwa uye kugadzira ndiro bhizinesi ravo guru.Uyezve, zvikamu zvesimbi CNC machining, prototype zvigadzirwa R&D, yekuongorora gadziriso / geji R&D, zvigadzirwa zvepurasitiki zvekuumba, kupfapfaidza uye kusangana zvakare zviitwe.
Hurrah!Tiri kuenda kuChirimwa chitsva!
Vanodiwa shamwari, mangwanani akanaka mose!Nhasi ndiChikumi 8, 2017, tine rukudzo rukuru kumira pano, kubata mabiko ekuvhura kweEnuo mold Co., Ltd., uye kuona nguva isingakanganwiki yekuvhurwa kwekambani.Nekuda kwekutora chikamu chinoshanda kwevabatsiri veEnuo Mold, nekuda kwerutsigiro ... VERENGA ZVAKAWANDA
Wow!zororo rakanaka pamhenderekedzo yegungwa!
-Zororo kuDapeng beach Vanodiwa Enuo mold shamwari: Pese mwaka uchichinja, zvinozivikanwa kuti nguva inopfuura.Nekusaziva, Nyamavhuvhu ichashandurwa kubva pakarenda ya2018.Zhizha raenda zvishoma nezvishoma, uye matsutso ari kuuya.Kune ese Enuo mold vadyidzani, yapfuura 8... VERENGA ZVAKAWANDA
Kupisa Chirimo + sango kukukurwa kunakidzwa!
- Rwendo rwekuenda kuNankunshan Hot Spring Health Valley Anodiwa Enuo mold shamwari: Kunaya kwemazuva uye handizive kuti chitubu chapfuura.Kana kunze kwave kwakanaka, ndinoona kuti zhizha rasvika kwenguva refu.Nguva inogara iri mundima yedu yekusaziva, karenda ya2019 yakashandurwa... VERENGA ZVAKAWANDA
Nhasi izuva rinosetsa!
- Rwendo rwekuenda kuSongshan Lake Kubvumbi inofanirwa kunge iri nguva yerudo.Kuungana panzvimbo inotumbuka pechisi ndiko kunyara kwevanhu vazhinji mumoyo.Nekudaro, semuumbi, isu tinowanzo fanira kuisa pasi nhetembo yemoyo kwenguva pfupi yekuunza chirongwa uye ... VERENGA ZVAKAWANDA